Mayelana NATHI - Hefei Super Trade Company Limited
I-HEFEI SUPER TRADE CO., LTD
I-Hefei super trade company limited yasungulwa ngonyaka we-1998. Sitholakala enkabeni yedolobha i-Hefei, esifundazweni sase-Anhui, eChina, okuyibanga lesitimela esisheshayo samahora amabili kuphela ukuya eShanghai.
Sisebenza kakhulu ngezindwangu zasendlini, izindwangu Izinto zokusetshenziswa nezindwangu, izingubo, ukugqoka izinyawo, amacala, izikhwama, izimpahla zokusebenzisa nsuku zonke, izembozo zebhodi loku-ayina, ukukhanya kwekhandlela njalonjalo. Sithumela ikakhulukazi le mikhiqizo e-EUROPE, e-USA, eNingizimu Melika, e-Australia, e-Afrika, eMiddle East, e-Southeast Asia nakwamanye amazwe.
Imikhiqizo yethu ithunyelwa kakhulu eMelika, eningizimu Melika naseYurophu, futhi sithola idumela elihle kumakhasimende ethu, sikholelwa ku: "Ikhwalithi yokuqala, uma unekhwalithi,
unemakethe ". E-USA, sihlinzeka ngethawula lasebhishi, ithawula lokugeza, izingubo zokulala nengubo yokugeza kwi-Universal Studio; ENingizimu Melika, sinokubambisana neSuper market Cencosud neCOTO iminyaka engaphezu kwemihlanu ngezinto zasekhishini, ithawula lolwandle, okombhede EYurophu, sikhiqiza amasethi wokulala, ingubo yokugeza, izingubo zokulala, ithawula, i-poncho yeLidl neqembu lebhola lezinyawo. ICarrefour futhi ingenye yamakhasimende ethu amakhulu eYurophu.
Sinesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-20 ezindwangu zasekhaya. Ikhwalithi enhle kanye nensizakalo enhle kukufanele ngokuphelele ithimba lethu. Asinabanikazi bokugunyazwa kuphela njengeDisney FAMA, i-Universal Studio neSoccer Club, kepha futhi sinesitifiketi se-OEKO, isitifiketi seBSCI, isitifiketi sephepha le-FSC njalonjalo. Ngaphezu, inkampani yethu inezinhlobonhlobo zekhwalithi enhle, amanani entengo afanele nemiklamo yesitayela, imikhiqizo yethu isetshenziswa kakhulu kwimikhiqizo yendwangu.
Sinamathela esimisweni "sekhwalithi yokuqala, isevisi yokuqala, ukuthuthuka okuqhubekayo nokwenziwa kabusha ukuze kuhlangatshezwane namakhasimende" abaphathi.
Ukwenza inkonzo yethu iphelele, sinikeza imikhiqizo ngekhwalithi enhle ngenani elifanele.
Wonke amakhasimende amukelekile ukuthi abambisane nathi ngebhizinisi lokuwina noma nini.
Uma unesithakazelo kunoma imiphi imikhiqizo yethu nensizakalo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi ukuthola eminye imininingwane. Silangazelele ukubambisana kwakho ngokujulile.
Incwadi yase-Aegean Apparel Customs 2018
Isethi yokulala ye-Microfiber, ithawula lasekhishini, Indwangu yetafula le-PEVA, Umgijimi wetafula, Ubisi Flannel Duvet Cover, Isethi yokulala yoboya bamaCoral,